India Movie – မြန်မာသတင်းစုံ
နအေိမျရှိ ရှေးဟောငျးဆငျးတုတျောမှ ထူးထူးခွားခွား မကျြလုံးတျော ပှငျ့တဲ့အကွောငျး မြှဝလောတဲ့ မငျးသားကွီး ဦးကြျောသူ (ရုပျသံ)
အခြိနျနဲ့အမြှ Followers တှတေိုးနတေဲ့အမစေုအကောငျ့ကို ထိုငျကွညျ့ရငျး ပီတိဖွာနတေယျဆိုတဲ့ မောငျမောငျအေး
နယျပယျအသီးသီးမှ အနုပညာရှငျပေါငျးမြားစှာ ပါဝငျသီဆိုထားတဲ့ “SAVE THE WORLD” သီခငျြး ဗီဒီယိုလေး
Category: India Movie
Drive (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Drive (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး ================== Player ကားလို​ရွှေခိုးဇာတ်​ကားထွက်​ပြီးတဲ့​နောက်​ခုအသစ်​တစ်​ဖန်​ထွက်​လာတဲ့..Drive​ရွှေခိုးဇာတ်​ကားက​တော့ပရိတ်​သတ်​အကြိုက်​​ပေါ့ ရဲ​တွေအလိုရှိ​နေတဲ့..သူခိုးဘုရင်​ကဘယ်​သူဖြစ်​မလဲ..ဘုရင်​ဆိုတဲ့နာမည်​လိုက်​ရင်းးဘယ်​လိုလှည့်​ကွက်​​တွေနဲ့သမ္မတအိမ်​​တော်​ကြီးကိုဝင်​ခိုးမလဲ 2019 ‧ Drama/Crime ‧ 2h 27m ဒီတစ်ခါတော့… မင်းသားချော Sushant Singh Rajput နဲ့ မင်းသမီးချောချောလေးဖြစ်တဲ့ Jacqueline Fernandez နဲ့ Sapna Pabbi တို့ရဲ့ Drive ဆိုတဲ့ အမိုက်စား အလန်းစားကားလေးကို တင်ဆက်ပေးပါရစေ… ဇာတ်ကားကြည့်ရန် 👉👉👉>>>ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ<<<
Uri: The Surgical Strike (2019) ======================== 2019 နှစ်စပိုင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့မှတ်တမ်းပေါင်းများစွာနဲအောင်ပွဲခံနေတဲ့ ဘောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားပါပဲ။ ——————————————————- “ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း”” အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အဓွန့်ရှည် တည်မြဲပါစေ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အဓွန့်ရှည် တည်မြဲပါစေ “အသံတွေဟာ အရောင်မဲ့လည်း ခွန်အားပါလွန်းသည် ။ အထူးတပ်ဖွဲ့မို့လည်း ဗျုဟာ ကျွမ်းလှသည်။သတ္တိရေးရာမှာ မကြောင်သလို ဥာဏ မှာလည်း မညံ့။ယောက်ျား ဘာသား ဟူ၍ တဇွတ်ထိုးထိုးစစ်မဆင်။ စစ်ချီအား အလုံးအရင်း မသုံး။သို့သော် တိုးတက်သော နည်းပညာအပေါ် Read more
Total Dhamaal (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Total Dhamaal (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး ========================= ငမြွေထိုး ၃ ကောင်နှင့် သန်း ၅၀၀ အရှုပ်တော်ပုံ တခါကရဲမှုးကြီးတစ်ယောက်ပာာဒုစရိုက်သမားတွေရဲ့ငွေမဲ သန်း ၅၀၀ ကိုအပျောက်ဖျောက်ပြီးအပိုင်သိမ်းဖို့ကြံနေတဲ့အချိန် ထိုရဲမှုးဆီကပြန်ပြီး ငမြွေထိုး ၃ ကောင်ပာာ တဆင့်ပြန်ဘတ်ပြီး လှိမ့်ဖို့ကြံသောအခါ ထို ၃ ကောင်ထဲက ကားသမားပာာကျန်တဲ့ငွေထုတ်ပစ်ချပေးတဲ့ ၂ ကောင်ကို ချန်ထားရစ်ကာ တစ်ယောက်ထဲအပီသိမ်း လစ်လေတော့သည် ဒါနဲ့ကျန်တဲ့ ၂ ကောင်လည်းအဲ့ကားသမားနောက်ကိုလိုက်ကာ ငွေတွေပြန်အရယူဖို့ကြံသောအခါ ကားသမားက သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ် လေးနဲ့ ထွက်ပြေးရင်း လမ်းခုလတ်တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျလေတော့သည် Read more
Romeo Akbar Walter (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Romeo Akbar Walter (2019) မြန်မာစာတန် ************************************* စပိုင်ဇာတ်ကား ချစ်သူများအတွက် အိန္ဒိယဇာတ်ကား Romeo Akbar Walter (2019) နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေ အရှေ့ပါကစ္စတန်(ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ရဲ့ ခွဲထွက်တဲ့ကာလက အကြောင်းအရာကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူကို အားကျစိတ်နဲ့ စစ်ထဲကိုဝင်ပြီး စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ထူးချွန်ခဲ့ပေမဲ့ ဖခင်ဆုံးပါးသွား တဲ့အခါ အမေတစ်ခုသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အမေ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ စစ်တပ်ကထွက်ခဲ့ရတဲ့ ဘဏ်စာရေးလေး ရိုမီရိုအလီတစ်ယောက် တစ်နေ့မှာ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်ထမ်းနိုင်ဖို့ Read more
Oosaravelli (2011) မြန်မာစာတန်းထို
Oosaravelli (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး ********************* ဝန်ကြီးဘာရာနီနဲ့ သူ့ရဲ့သား ရာကက်ခ်တို့ သတင်းမရပဲ ပျောက်သွားတာ (၂၄) နာရီ ရှိပြီ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အရေးပေါ်ဆွေးနွေးပွဲဟာ ဝန်ကြီးပျောက်ဆုံးမှုအပြင် မူးယစ်ရာဇာ Ajju Bhai ရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေ ကိုလည်း ကြောက်နေပုံရတယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာတော့ … Ajju Bhai ရဲ့ အကို Irfan Bhai နဲ့အတူ ဝန်ကြီးဘာရာနီနဲ့ သူ့ရဲ့သား ရာကက်ခ် တို့ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်..။ ဒီကိစ္စစုံစမ်းဖို့ အထက်က လွှတ်လိုက်တဲ့ Read more
One Night Stand (2016) မြန်မာစာတန်းထို
One Night Stand (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး =============================== IMDb 3.2 Drama, Romance | 1h 37 min | One Night Stand (2016) 18+ ဟိုခန်းဒီခန်းလေးတွေပါလို့၁၈+ ပေးထားပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးပညာပေးကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ရပါစေ… ဇာတ်လမ်းတွင် Urvil Raisingh နှင့် Celina တို့ ၏ အမှတ်ရစရာညအချိန်တွင် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်တွ့ဆုံသည့် အကြောင်းပါ။ သူတို့ဘဝတွေကို အိမ်ပြန်ဆက်လက်ပြန်လည်တည်ဆောက်သောအခါ Celina ၏အမှတ်တရများက Read more
Mr Nookayya (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mr Nookayya (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ====================== IMDb 6.4/10 Action / Comedy. 2h 20m ဒီတစ်ခါတော့ အိန္ဒိယ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားနဲ့ ပရိတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ… မင်းသားချော Manchu Manoj နဲ့ မင်းသမီးချော Kriti Kharbanda နဲ့ Sana Khan တို့ရဲ့ Mr. Nookayya ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပီနော်… ဇာတ်ကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 Mr Nookayya (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး Read more
Mersal (2017)မြန်မာစာတန်းထိုး ××××××××××××××××××××××× Mersal ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် IMDB rating 8.8/10 ရရှိထားပါတယ် သရုပ်ဆောင်များအနေနဲ့ မင်းသား Vijay,Samantha,Nithya Menon တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော သဲထိတ်ရင်ဖိုအက်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒေါက်တာ Marran တစ်ယောက် ဆေးပညာရပ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုတက်ရင်း အခြားဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Arjun နဲ့မသင့်မမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ထို့နောက် Arjun နဲ့လက်ထောက် Anu Pallavi တို့ကို့ မျက်လှည့်ပြပွဲကြည့်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် မျက်လှည့်ပြနေစဉ် ဒေါက်တာ Arjun တစ်ယောက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ…… တရားခံအစစ်အမှန်ကဘယ်သူလဲ……. နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲဆိုတာ……. Read more
Alone 2015 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Alone 2015 ( မြန်မာစာတန်းထိုး ) ************************* ငယ်ငယ်တည်းက သိပ်ချစ်ကြတယ့် ရင်ချင်းဆက်အမြွာညီမနှစ်ယောက်ဟာ့ တယောက်သောသူက သူ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ အတူနေချင်တယ့်အတွက့် ညီမသံယောဇဉ်ကို ဥပေက္ခာပြုပြီး အသက်နဲ့ရင်းရမယ့် ခွဲစိတ်ကုသမှု့ခံယူခဲ့ရပါတယ့် နှစ်ယောက်မှာ နယောက်သာပြန်ကောင်းခဲ့ပီ့း တယောက်ကသေဆုံးသွားတယ့်အခါမှာတော့ #ကောင်လေးနဲ့ကြိုက်တယ့်ကောင်မလေးနဲ့ပေါင်းစည်းရပါ့မလားးးးးးးး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ငယ်ဘဝက အိမ်ကိုပြန်သွားရတယ့်အခါမှာ ဘာပြသနာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့့ ဇတ်ကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 Alone 2015 ( မြန်မာစာတန်းထိုး ) ဇတ်ကားကြည့်ရန် Down ရန်
Bullet Rani (Jana Gana Mana) မြန်မာစာတန်းထိုး
Bullet Rani (Jana Gana Mana) မြန်မာစာတန်းထိုး ———————————————- 2019 . Action, Crime အညွှန်း အများလေးစားရတဲ့ ဘာသာရေးဆရာကြီးတစ်ဦးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အမှု သမီးဖြစ်သူယာဉ်မတော်တဆမှုနဲ့ဆုံးပါးသွားပြီး ခမည်းမခက်ဖြစ်သူအိမ်ကို အကျိုးအကြောင်းသွားပြောရာမှ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ….။ လက်သည်ဘယ်သူလဲဆိုတာ အားလုံးသိနေကြပေမယ့် အာဏာပါဝါကြီးလွန်းတာကြောင့် ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘယ်ရဲဌာနမှ မကိုင်တွယ်ရဲတဲ့အမှု… သို့ပေမယ့် ဂျာစီဆိုတဲ့ရဲမေလေးကတော့ မိန်းကလေးတန်မဲ့ အကြောက်အရွံ့ကင်းစွာနဲ့ ဒီအမှုကိုလက်ခံဖို့ရဲရဲတင်းတင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…. သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ပဲ ယုတ်ယုတ်မာမာကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့ဒီအမှုကို ရဲမေလေးဂျာစီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအကွက်ချဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာ…. ဇာတ်ကားကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 Bullet Rani (Jana Gana Mana) Read more
(၁၄)ကွိမျထီဖှငျ့ပှဲမှာ သိနျး(၂၀၀၀)ဆုပေါကျတဲ့သူဟာထီရောငျးတဲ့တှနျးလှညျးသမားလေးပါ ကားလေးနဲ့ထီဆကျရောငျးမယျတဲ့ခငျဗြာအားပေးကွပါအုံးတဲ့နျော
အိမျထဲမှာနရေငျးအဓိဌာနျဝငျကုသိုလျယူကွမယျ့ Challengeလေးတဈခုကိုပွုလုပျခဲ့တဲ့ စမိုငျးလျ